Steve Jobs: Ka Ha Rie Okwu! | Martech Zone
M na-ede ihe a na keyboard Apple, na Apple MacBookPro m, na Ngosipụta Cinema Apple m, yana Apple Apple… jikọtara na Apple Time Machine m. Anaghị m akpọ onwe m Apple fanboy, mana ogo ngwaahịa ha bara uru maka ọnụ ahịa ndị ọzọ n'echiche m.
Ọ bụghị naanị ịma mma nke ngwaahịa ha ka m nwere ekele maka ya, ọ bụkwa ihe omimi ahụ na amamihe Apple na-abụ ụzọ dị n'ihu na ọkwa dị elu karịa onye ọ bụla. O doro anya na Apple na PC mkpọsa PC dị ọchị, na-egbu mgbu (maka PC) ma jiri usoro abụọ ahụ tụnyere. Ma, ha jiri nnukwu ọdịiche dị n'etiti usoro ahụ tụnyere, ọ bụghị otu ha si yie.
ruo mgbe taa.
Steve Jobs kpughere iri afọ abụọ nke ahịa Apple zuru oke na mystique taa site na ikweta na Apple iPhone 4 bụ dị ka ekwentị ọ bụla, na-ekwu, “Ọ bụghị naanị na iPhone 4… ị nwere ike ịga Youtube wee hụ Nokia ekwentị na ekwentị Motorola na-eme otu ihe ahụ."
N'azụ ya na ihuenyo:
Ọ bụghị naanị na iPhone
Chaị. N'ihe karịrị okwu 170,000 na akwụkwọ ọkọwa okwu Bekee, Steve Jobs kpebiri iji otu okwu kachasị mkpa m hụrụ na ụdị Apple. Pụrụ iche. Mgbe m zụtara nwa m nwanyị iPhone na ụgwọ m bụ 30% karịa akwụkwọ m Verizon (Droid), echere m pụrụ iche bụ kpọmkwem ihe m na-akwụ ụgwọ. Achọghị m ịma ịkwụ ụgwọ maka ihe ọzọ unique
Apple bụ pụrụ iche. Ruo taa. Ugbu a ha bụ ndị nrụpụta ọzọ maara na ha nwere nsogbu, ma ha dị mpako nke na ha kpebiri ịhapụ ngwaahịa ha n'ụzọ ọ bụla. Ọrụ na-ekwu na akụkọ Bloomberg "bụ crock", nke na-ajụ ajụjụ banyere ụdị ule Apple ọ mere n'ezie?
Yabụ taa, Azịza ọrụ maka igwe mmadụ? “Ka ha rie achicha!“. O kwughi n'ezie na… mana ọ dị nso: "Ka ha nwee ikpe kwụ ọtọ!"
Tags: apụliphone 4arụ ọrụ
Jul 17, 2010 na 9: 04 AM
Oh my gosh, amabeghịdị m anya mgbe ọ kwuru nke ahụ mana ị hụrụ ntụpọ. Hey onye ọ bụla na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ maka ngwaahịa anyị n'ihi na ihe anyị na-akwụ abụghị naanị ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ahụ kama ịkwụ ụgwọ maka ikike ịbụ hip ma dị jụụ. Oh chere, na echiche nke abụọ, anyị dị ka onye ọ bụla. Ma anyị ga-edebe ego gị. Daalụ.
Jul 17, 2010 na 9: 05 AM
Dịka ndetu akụkụ, Doug, ihe ọ bụla ị na-eri ma ọ bụ na-a drinkingụ n'oge gara aga ụbọchị ole na ole, debe ya. Oge ole na ole ị dere blọọgụ bụ ihe kacha mma m gụrụ. Ị mere nke ọma!
Jul 17, 2010 na 11: 36 AM
Daalụ Patric! Nwee ekele maka okwu ọma ahụ. M n'ezie nwetara ụfọdụ ụdị nke afo ahụhụ… ma eleghị anya, m na-eche ka mma mgbe m na-araparawo a obere tiled ụlọ ụbọchị niile. : - [
Jul 22, 2010 na 11: 04 AM
Enwere m mmasị n'okwu gị banyere okwu ahụ bụ "pụrụ iche," mana m ga - ekwenyeghị na ihe ị na - eme na mmepe a kụrụ Apple aka n'otu gbọmgbọm ndị ọzọ. Ọ ga-adị ka ịsị Apple rụpụtara ihe ịga nke ọma n'ihi antenna.
The iPhone nwere ọtụtụ myirịta na mbụ motorola brik ekwentị - nọmba, igodo, antenna obere processors, ma ihe dị iche bụ ọhụrụ na software. Antenna anaghị ewepụ eziokwu ahụ bụ na iphone bụ n'ezie otu narị otu narị ngwaọrụ - akwụkwọ, ntụgharị (egwuregwu) ngwaọrụ ustream ọbụlagodi plọg ma ọ bụ ọkwa maka iti mkpu n'oké olu.
Ntughari maka iche na mkpa maka ihe na-esote nwere ike mepụta 20% nke ahịa na mbido mana na-anapụta nkwa ya nke ịbụ ngwaọrụ mgbanwe bụ ihe mere ka ọ daa mba. Igwe ndị ọzọ niile nwere nsogbu mpi ka bụ ndị na-eso ụzọ.